Ukuncokola noJo Nesbø e-Barcelona. IKosmópolis, _La sed_, iHarry Hole nokunye okuninzi | Uncwadi lwangoku
Ukuncokola noJo Nesbø e-Barcelona. Kosmopolis, _La sed_, Harry Hole kunye nokunye okuninzi
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, I zi ganeko, Inoveli emnyama
Imvelaphi yokufota: © Thron Ullberg
Unyanisile. Sasikhona (mna emoyeni kodwa ngentshiseko efanayo) kunye Jo Nesbø ngalo mgqibelo udlulileyo Barcelona. Ngexesha lokundwendwela kwakho IKosmopolis, umbhali waseNorway naye uthathe inxaxheba kwi ukudibana nabafundi bakho Oququzelelwe kukhuphiswano iphepha lendlu yokupapasha epapasha iincwadi zakhe eSpain.
Umbulelo ongazenzisiyo kuIsabel de la Mora, othe ngomlando wakhe kunye noHilda Pérez noAraceli Ferrer, oogxa bakhe Uxhonywe kuJo Nesbø, lenze ukuba eli nqaku libekho. Ndibalisa ngento uNesbø awayeyithetha ngethoni ekhululekileyo nesondele yomfundi / umbhali. Kwaye ndigqibezela ngokufutshane kuhlolwa de Unxaniwe leyo, njengoko bendilindele, sele ithathe iintsuku ezimbini. Ngale nto ndigqiba ukuphela kwenyanga kwe-Nesbø. Kunjalo nje, Usuku lokuzalwa olumnandi namhlanje, utitshala. Yenze enye i-57 ubuncinci.
2 Kunye nabafundi bakho
2.1 UHarry Hole, abanye abalinganiswa, ukugxeka ezopolitiko kunye namajelo eendaba
2.2 Macbeth kunye ne-Snowman
NgoMgqibelo 25 u-Jo Nesbø wamenyelwa IKosmopolis kwinkomfa kunye UMfundisi kaMarc. Kunye nomlobi waseCatalan ukuncokola nokuphendula imibuzo. Imdidlalo eqhubayo yeTV Usebenzile, enye wedstopia, apho ayintloko yokucinga, ibingomnye wemixholo ngokubhekisele kwi Uncwadi oluguqula ukutshintsha kwemozulu. Kodwa uNesbø ucacisile ukuba olu luhlu lwehla ngendlela yokubuyisa uloyiko lwelizwe elincinci (eNorway) lokuhlaselwa lutshaba olomeleleyo (iRussia). Imeko engenakuqondwa ngaphandle kokwazi ixesha elidlulileyo laseNorway.
Baye bathetha nange Unxaniwe ukusuka a uluvo phakathi kwababhali zinikezelwe kuhlobo olufanayo. Umfundisi, njengoko ulwaphulo mthetho, wabamba ukuthelekisa amanani olwaphulo-mthetho INorway (abahlali abazizigidi ezihlanu) kunye neCatalonia (enabasixhenxe). Kwaye bafumanisa ukuba iCatalonia, unyaka nonyaka, idlule kakhulu kwinani lolwaphulo-mthetho kwilizwe laseNordic. UNesbo waqhula esithi yindlela awayebonakala engcono ngayo kwifoto yezo manani.
Iifoto ngu @kosmopolisCCCB kunye @JLEspina. Nge-Twitter.
Kunye nabafundi bakho
Kodwa phambi kwenkomfa uNesbø wayekwi Ndifumana okungacwangciswanga ngakumbi Isibini sabafundi abanethamsanqa abakwaziyo ukubuza imibuzo eliqela. Yile nto wabaxelela yona.
UHarry Hole, abanye abalinganiswa, ukugxeka ezopolitiko kunye namajelo eendaba
Los iingcinga ezizezakho kunye nezikhundla kaNesbø zibonwe ngakumbi nangakumbi kwiinoveli zakhe. Vula Unxaniwe ngakumbi umzekelo kukho enkulu uphononongo kwindlela yokusebenza ye majelo. I Imvakalelo kunye nantoni na iyahamba Zibonakala kakuhle. Nantsi ikumlinganiswa we intatheli engathandabuzi ukuthatha umngcipheko kuyo nayiphi na into yokufumana ibhombu yolwazi kwityala eliphantsi kophando.
La urhwaphilizo kwezopolitiko yenye yemixholo yakhe ephindaphindayo esele ikwizihloko zangaphambili zothotho lweHarry Hole. Uyenze ngokwezifiso ngobuchule Omnye wabalinganiswa abangathembekanga nabanomdla ngaphandle kwemida evelisa ukwaliwa kunye nokunconywa. Intloko yamapolisa UMichael Bellman Ayinakuthelekiswa nanto ekudalweni kwayo kwaye ibonisa kwakhona ngaphandle kwenceba into enokwenziwa ukufezekisa amandla.
Malunga UHarry hole eyona nto siyithandayo apha yeyakho ulungelelwaniso olunzima phakathi koxanduva lokuziphatha indlela oziva ngayo kusapho lwakho kunye umsebenzi wentlalo ngokubhekisele emsebenzini wakhe. Kwakhona, njengakwi Amapolisa, Uyaqhubeka nokuziva onwabile kwaye ukuba umntu onje ngeHole kunzima ukucinga kwaye aphathe. UNesbø wayigxininisa loo nto ulonwabo luyamoyikisa kwaye uhlala enayo ukuthandabuza ukuba ungayigcina njani okanye iza kuhlala ixesha elingakanani. Okanye, njengoko kusaziwa izothatha ixesha elingakanani ukuyonakalisa ke abayonakalisi. Kwaye ngeli xesha uyingqinisisa ngokuthe ngqo.
Bambuza nangomnye umlinganiswa abaphosayo abafundi Sole Hole, Udadewabo kaHarry. UNesbø uphendule wathi u-Søs unayo intlawulo eninzi ngokweemvakalelo ethathe indawo kuHarry, ngengqondo yokuba ingangaphezulu kuthi sobabini. Kwaye wagqiba kwelokuba ayibeke ecaleni kwiincwadi zokugqibela.
Uye wathetha nangendlela ngamanye amaxesha ayikwazi "ukulawula" ukuvela komlinganiswa. Le yindlela awayixela ngayo eyona nto inomdla ayenzileyo, UTulss Berntsen, umnqamlezo ongwevu nowenambuzelayo wengqekembe onguye noMikael Bellman. Ukuhla kwakhe esihogweni ngexesha lezihloko ezimbalwa zokugqibela kunokuthetha ukuhlangulwa kuphela. Kwaye uNesbø wavuma elubala ukuba wayengalibonanga elo jika kodwa lalililo.
Ifoto ngoncedo luka-Isabel de la Mora. Ndiyabulela kakhulu ngeli bali.
Macbeth kunye ne-Snowman
La Inguqulelo ye Macbeth kwilinge IHogarth inyikima Kuyabonakala ukuba sele inamaphepha angama-500 engekagqibi. Kucetyelwe 2018. Inguqulelo mahala kakhulu yomdlalo kaShakespeare. UNesbø ubeka abalinganiswa abaphambili kwisixeko saseYurophu kwelona xesha libi Ngama-70. Kwaye akukho zinkosana nookumkani, kodwa I-SWAT kunye nepolisa eliphezulu ukulwela isikhundla somkomishinala wamapolisa oza kuthi athathe umhlala-phantsi.
Malunga Umntu weqhwa khange bayiqaphele ngehlombe kakhulu. Yatsho Khange ndibandakanyeke kwiskripthi okanye kukhetho lwabadlali. Andizange ndibone nantoni na kumdlalo bhanyabhanya (nangona unayo kufika). Kwaye xa bamxelelayo ukuba abamboni uMichael Fassbender njengoHarry Hole, wahleka iyelenqe kwaye wathi ngokokwazi kwakhe, masingalindeli ukuba imovie ibonakale njengencwadi. Kwaye ebuyela eShakespeare wagqabaza esithi okoko umsebenzi wakhe ungakhange uhlonitshwe kangako, wenze okufanayo nange-bard yesiNgesi nangona, kunjalo, egcina imigama. Ngapha koko, siza kubona ngo-Okthobha.
Yintoni oza kubhala ngayo Amaphepha ama-5 okanye ama-6 ngesishwankathelo esincinci y Iinyanga ezi-6 zophando, amaxwebhu, ulwakhiwo nayo yonke into icacile (qala ugqibe). Xa ifika kwisahluko sokuqala sele inesakhiwo kunye nengxoxo encinci. Usebenzisa lo mthombo ukuthatha abalinganiswa apho afuna khona.
Eyona nto ibaluleke kakhulu: yile Isahluko sokuqala siphuma sijikeleza kuba ngale ndlela kwesesibini unokuba ungalunganga. Wajonga ngasemva wakhumbula ukusilela endandinayo ngaphezulu kwako konke ngohlanga xa bejonga kancinci imisebenzi yakhe. Ngoku, ngabahleli aba-5, izinto zitshintshile kakhulu.
Ndiza kuzikhawulela ekubonakaliseni kwam: enye inoveli ingqukuva kwaye iyakhazimla. Iimeko ezilahlekisayo, iziqwenga, isiphelo esingagqibiyo, izoyikiso ezibalulekileyo kunye neziganeko ezingalindelekanga okanye ezimangazayo, kunye nemiboniso bhanyabhanya yendlu. en Ingwe sineapile kaLeopold enambuzelayo, apha, ekhwankqisayo amazinyo entsimbi. Ke igazi kuyo yonke indawo. Kodwa kwakhona, mhlawumbi ukwenza iMacbeth, kukho irhafu kuShakespeare kumfanekiso we Othello, ekubeni umona unendima ebalulekileyo kweli bali litsha. Kwaye isigwebo sokugqibela esi ... Nokuba kunjalo, lonto kuya kubakho ngakumbi uHarry. Okwangoku
Ngapha koko, enye yingqondi evela kwinkosi Oslo. "Siyakudinga, Harry"Utshaba lwakhe olunamandla kakhulu luye lwamxelela. Kwaye ukuba uyayifuna, nangakumbi. Ukuqhubeka nokonwabela i-Hole bullion. Iimvumba zakhe zokubhala azilibaleki kwaphela. Ngokuqinisekileyo andidinwa ngabo.
Kwaye njengesikolo sokugqibela: kunokwenzeka ukuba UNesbø unjalo kwi Umboniso weNcwadi eMadrid kunyaka olandelayo. Lixesha lokuba abuyele kwithafa eliphakathi. Ukusukela namhlanje sele ndinesandla esivulekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Ukuncokola noJo Nesbø e-Barcelona. Kosmopolis, _La sed_, Harry Hole kunye nokunye okuninzi
Ndilibele nje ukubhala kwi-chronicle ubudlelwane obukhethekileyo anabo no "Robin"; U-Nesbø wethu wokuqala, kuye yirhafu kuyise.
Ewe, kodwa ungakhathazeki. Yenzeka nakum. Kwaye nam ndiyishiyile lento ubuyithetha Izihloko zentloko. Kodwa yiza, yonke into ibaluleke kakhulu.
Rumor wabafi, inoveli eyothusayo ngu-Enrique Laso
Kwiminyaka engama-75 eyadlulayo uMiguel Hernández wasweleka